Fifidianana zava-baovao ho an'ny Janoary | Literatiora Vaovao
Fifidianana zava-baovao ho an'ny Janoary
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 01/01/2022 12:00 | Nohavaozina amin'ny 29/12/2021 18:25 | boky, Novela, Noely mainty
Taona hafa izay tonga feno feno vakiteny vaovao. Io izany fifantenana anaram-boninahitra sasany izay navoaka tamin'ny Janoary. Ho an'ny tsiro isan-karazany sy ny anarana nasionaly sy iraisam-pirenena.
1 Tetikasa Silverview - John Le Carré
2 Ny ankizivavy hafa - Santiago Díaz
3 Ny Forge of a Rebel - Lorenzo Silva sy Noemí Trujillo
4 Ririnina dimy - Olga Merino
Tetikasa Silverview - John Le Carré
Manomboka amin'ny klasika misy tantara lava toy ny Le Carré isika. Ny tantarany vaovao dia mampahafantatra antsika an'i Julian Lawndsley, izay niala tamin'ny asa fitakiana nataony tao amin'ny Tanànan'i Londres mba hanana fiainana tsotra kokoa amin'ny maha tompona fivarotam-boky ao amin'ny tanàna kely amoron-dranomasina. Saingy roa volana taorian'ny fitokanana, ny fitsidihana dia nanapaka ny fahatonian'i Julian: ny an'i Edward Avon, Poloney mpifindra monina monina ao Silverview, trano lehibe iray any ivelan'ny tanàna, izay toa mahalala zavatra betsaka momba ny fianakavian'i Julian ary mampiseho zavatra be loatra. liana amin'ny fampandehanana ny raharahany tsotra.
Ny ankizivavy hafa - Santiago Diaz
Santiago Díaz dia nanao ny bitany voalohany nataony tamin'ny tantara Ilay ray tsara Nahazoany fahombiazana be mpitsikera sy mpamaky. Niverina indray izy izao nitondra io anaram-boninahitra faharoa io ny inspektera Indira Ramos. Hitanay nandany andro fialan-tsasatra farany tao amin'ny tanàna kely iray any Extremadura izy ary oviana miverina miasa Any Madrid, sarotra ho azy ny miatrika ny Sub-inspektera Iván Moreno, izay anafeniny tsiambaratelo goavana.
Tsy maintsy hiara-hiasa indray anefa izy ireo amin’ny famahana tranga vaovao: eny amin’ny tobin-dasantsy ny dian-tongotra dian-tànan'ilay izay nandritra ny taona maro ilay lehilahy karohina indrindra teto amin’ny firenena. Ny vono olona feno habibiana nataony no voatondro ary tsy azon’ny polisy tazonina intsony ilay tena voarohirohy, izay niaina tao anatin’ny fisolokiana efa ela. Saingy resy lahatra i Ramos fa mpamono olona toa azy tsy maintsy namono indray izyr, noho izany dia mila mitady heloka bevava izay tsy ho afa-maina ianao.
Ny fiforonan'ny mpikomy - Lorenzo Silva sy Noemí Trujillo
Lorenzo Silva dia manokatra indroa 2022 miaraka amin'ity anaram-boninahitra ity nosoratana tamin'ny tanana efatra indray niaraka tamin'i Noemí Trujillo. Ao anatin'izany izy ireo no mandray Inspektera Manuela Mauri izany, hatramin'ny fiandohan'ny fanairana ara-pahasalamana, tsy nanana fofonaina izy ary sambany teo amin'ny fiainany no nahatsapa reraka ny amin'ny hetsika. Avy eo, ary ankoatra izany, a heloka bevava indroa Ny zava-nitranga tao Alcalá de Henares dia hanala ny torimasonao: Carlota, zazavavy sivy ambin'ny folo taona, dia nampandre ny polisy rehefa nahita ny rainy sy ny renikeliny maty voatifitra tao an-tranon'izy ireo. Ny antoko tsy ara-dalàna sy ny fijoroana vavolombelon’ireo tanora folo miady amin’ny fiarahamonina no ho fototry ny famahana ny raharaha.
Ankoatra izay dia manolotra ihany koa i Silva ny tanan’i Estera, iray fanangonana lahatsoratra noho ny ankehitriny avy hatrany nanomboka ny lohataona 2020 ka hatramin'ny tapaky ny fararano 2021.
Ririnina dimy - Olga Merino
Nipetraka i Olga Merino Moscow ho mpanao gazety Ny Gazety Catalonia tamin’ny Desambra 1992, kely taorian’ny nianjeran’ny Firaisana Sovietika. Nandany ririnina dimy tao izy ary tao vavolombelon'ny fiovan'ny vanim-potoana iray manontolo izay nanamarika ihany koa ny taloha sy taorian'ny fiainany manokana. Ao amin'ity diarin'ny zazavavy valo amby roapolo taona ity, dia milaza amintsika ny fomba fikatsahany ny nofinofiny ho mpanoratra, laza matihanina amin'ny maha-mpanao gazety azy, ary fitiavana feno sy ambony. Ny zava-drehetra dia mifanohitra amin'ny feon'io idealista io ankehitriny.
Ny zava-baovao momba an'i Isabel Allende dia nalaza tamin'ny anaran'ny vehivavy iray: Violeta, izay tonga eto amin'izao tontolo izao amin'ny andro feno tafio-drivotra. 1920 ary izy no lahimatoa ao amin'ny fianakaviana misy dimy mianadahy mitabataba. Hatrany am-boalohany dia ho voamarika ny fiainanao fisehoan-javatra miavaka. Mbola misy ny akon’ny Ady Lehibe rehefa tonga any amin’ny morontsirak’ilay firenena niaviany any Amerika Atsimo ny gripa espaniola, saika amin’ny fotoana tena nahaterahany.
Noho ny rainy, ny fianakaviana dia hivoaka tsy ho voa amin'ity krizy ity mba hihaona amin'ny fianakaviana vaovao: ny Fahakiviana lehibe manelingelina ny fiainan'i Violeta kanto hatramin'izay. Ho very ny zava-drehetra ny fianakavianao ary terena hisotro ronono a faritra bibidia ary lavitra ny firenena. Any i Violeta dia ho lehibe ary hanana azy mpifankatia voalohany.
Ao amin'ny taratasy Niresaka tamin'ny olona tiany mihoatra noho ny hafa rehetra i Violeta tia fahadisoam-panantenana sy tantaram-pitiavana feno fitiavana, fotoan'ny fahantrana sy fanambinana, fatiantoka mahatsiravina ary fifaliana lehibe.
Ary mifarana amin'ny tantara iray hafa momba ny Vargas Way, ilay inspektera malaza an'i Martín Gijón. Amin'ity tantara vaovao ity ny fisehoana amin'ny kianja golf an'ny faty ra an'ny vehivavy iray mametraka ny fanamarinana ny Vondrona Famonoan'olona an'ny Sevilla. Ary koa, ho an'ny niharam-boina notapahiny ny tongony. Tsy maintsy hanafoana ny fialan-tsasatra nokasaina i Vargas miaraka amin'i Paco Arenas, mpanoro hevitra azy taloha sy fitiavana miafina izay nipetrahany tamin'ny farany. Anjarany ny manao fanadihadiana eo anivon’ny tanàna iray ao fanairana ambony indrindra amin'ny toetry ny andro ary ravan'ny oram-be izay namela olona maro tsy hita popoka.
Mandritra izany fotoana izany, mirongatra ny vaovao fa ny mety mbola velona ilay mpamono olona nomena anaram-bositra hoe Animalista Ary tsy hanao zavatra irery izy, satria nisy lehilahy mihodidina niseho tao amin'ny toeram-pambolena, nisy trangan-dra tao amin'ny aquarium ary nisy fandrobana mistery tao amin'ny seranan-tsambon'i Huelva. Saingy tsy ho ela dia hifaninana amin'ny fotoana ny brigade manontolo mba hanavotra olona an-tapitrisany amin'ny loza lehibe kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Haisoratra ankehitriny » entana » Novela » Fifidianana zava-baovao ho an'ny Janoary
Gloria Fuertes: tononkalo